Ny filana lehibe indrindra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny filàna lehibe indrindra
«Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra ... Tao Aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, ary ny maizina tsy nandray azy. " Jaona 1, 1 - 4 (Baiboly Zurich)
Nisy kandida iray ho an'ny birao politika any Etazonia nangataka masoivoho dokam-barotra iray mba hamolavina sary ho azy. Nanontany azy ny mpamorona dokambarotra hoe iza amin'ireo toetrany tiany hohamafisina.
"Toy ny mahazatra ihany," hoy ny valintenin'ilay kandidà, "faharanitan-tsaina ambony, fahatsoran-tena tanteraka, fahatsorana tanteraka, tsy fivadihana tanteraka, ary mazava ho azy, fahamaotinana."
Miaraka amin'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao, afaka miantehitra amin'ny mpanao politika isika, na izany aza na tsara na mety izy, fa ho hita fa ho fantatry ny besinimaro ny fahadisoana rehetra, ny diso rehetra, ny fanambarana na fanamarihana tsy marina rehetra. Ny mpifaninana rehetra, na ho an'ny parlemanta na ho an'ny vondron'olona ifotony dia hita amin'ny hetahetan'ny media.
Mazava ho azy fa mahatsapa ny kandidà fa mila mametraka ny sariny amin'ny fomba tsara indrindra izy, raha tsy izany dia tsy hitoky azy ireo amin'ny fomba rehetra ny olona. Na eo aza ny tsy fitoviana ary na eo aza ny hery sy ny fahalemena manokana, dia ny olombelona rehetra dia marefo daholo. Andao hiatrika izany, tian'izy ireo hamaha ny olana lehibe misy ny firenentsika sy izao tontolo izao izy ireo, fa tsy ny fahefana na ny fomba hanaovana izany fotsiny izy ireo. Azon'izy ireo atao ihany no atao mba hitandrina ny zavatra tsy azo ekena mandritra ny fotoana hitokanan'izy ireo.
Mbola mitohy ny olana sy ny aretina amin'ny fiarahamonin'olombelona. Ny habibiana, herisetra, fitiavam-bola, fanodikodinana, tsy fahamarinana ary fahotana hafa dia mampiseho amintsika fa misy lafiny maizina kokoa amin'ny zanak'olombelona. Raha ny tena izy ity haizina ity dia avy amin'ny fanalaviran'Andriamanitra izay tia antsika. Io no loza lehibe indrindra tsy maintsy iaretan'ny olona ary koa antony mahatonga ny faharatsian'ny olombelona hafa rehetra. Ao anatin'io haizina io dia mitombo ny filàna mihoatra ny hafa rehetra - ny filàna an'i Jesosy Kristy. Ny filazantsara no vaovao tsaran'i Jesosy Kristy. Lazainy amintsika fa tonga amin'izao tontolo izao ny hazavana. "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao," hoy i Jesosy. "Izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina." (Jaona 8:12) .Namerina ny fifandraisana amin'ny Ray i Jesosy Kristy ary manova ny olombelona avy ao anatiny.
Rehefa mametraka ny fahatokisany azy ny olona dia manomboka maizina ary manomboka miova ny zava-drehetra. Izany no fiandohan'ny fiainana marina, fiainana ao anaty fifaliana sy fandriampahalemana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra.
Ry Ray any An-danitra, ianao dia fahazavana ary tsy misy haizina tanteraka akory ao aminao. Izahay dia mitady ny fahazavanao amin'ny zavatra rehetra ataontsika ary mangataka ny fahazavanao hanazava ny fiainanay mba hijanonan'ny maizina ao aminay, toy ny fandehanay miaraka aminao amin'ny mazava. Mivavaka an'io anarana io Jesosy izany, amena